ဂျပန်မှာ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ နံပါတ် (၁) မှာပြေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာမှာလည်း အလွန်ရိုးရှင်းနေတယ်။ - JAPO Japanese News
ဂျပန်မှာ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ နံပါတ် (၁) မှာပြေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာမှာလည်း အလွန်ရိုးရှင်းနေတယ်။
ဂါ 23 Nov 2021, 16:24 ညနေ
စာဖတ်သူတို့အားလုံး၊ ဂျပန်ရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲက ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်တွေကို သိထားကြလဲ?
TOYOTA၊ HONDA၊ Panasonic၊ SONY၊ YAMAHA အစရှိသဖြင့် နာမည်တွေထွက်လာမယ်လို့ထင်ပေမဲ့၊ KEYENCE ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရော သိကြပါသလား?
ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေဟာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်များတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီကုမ္ပဏီနာမည်ကို ဂျပန်လူမျိုးတွေထဲမှာတောင် သိတဲ့လူနည်းတယ်တဲ့…။
ဂျပန်တစ်ခွင်မှာတော့ ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း ၄ သန်းခန့်ရှိပြီး၊ ၎င်းရဲ့ ၀.၀၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၅၀၀ ခန့်ကတော့ ထိပ်တန်းရှယ်ယာဝင်ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ယခင်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာ စာရင်းဝင်ပြင်ဆင်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့၊ စာရင်းဝင်ဖို့အတွက်က ဘဏ္ဍာရေးသော်လည်းကောင်း၊ ရောင်းအားသော်လည်းကောင်း၊ လူအင်အားစုဆောင်းခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးသင်ကြားရေးသော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေရေးရာသော်လည်းကောင်း စတဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေက စနစ်ကျတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာမဟုတ်ရင် စာရင်းဝင်အဖြစ်မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်။ ထိုဓိပ္ပါယ်အတိုင်းပဲ ဒီကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၅၀၀ ဟာ ဂျပန်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလို့ပြောရင်တောင် ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာပေါက် စာရင်းမဝင်သော်လည်း အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိတာမို့လို့ အားလုံးကိုတော့ မဆိုလိုချင်ပါဘူး…
အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ နံပါတ် (၁) ဝန်ထမ်းရဲ့ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ငွေကို ကြွားလုံးထုတ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ KEYENCE Co., Ltd. ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်တဲ့ကိရိယာများကို အဓိကထားပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းရဲ့ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ငွေဟာ ယန်း ၁၅၂၃.၂ သောင်း ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့ Nomura Holdings Co., Ltd. ရဲ့ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ၁၃၇၇.၄ သောင်းယန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ သိသိသာသာကွာခြားနေကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။
တစ်သက်တာ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ၅၆၁.၆၄ သန်းယန်း ရှိပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်ရှိ NIPPON TELEVISION HOLDINGS ကုမ္ပဏီရဲ့ ၅၀၅.၀၅ သန်းယန်းနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်လောက်တောင် ဒီကုမ္ပဏီဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို လစာပေးကြမ်းလဲဆိုတာကို နားလည်ရပါတယ်။
စကားမစပ် ဂျပန်လခစားရဲ့ ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ငွေဟာ ယန်းသန်း ၂၀၀ ရှိတယ်လို့ပြောနေကြတာကြောင့်၊ ၎င်းရဲ့ ၂.၅ ဆနဲ့အချိုးကျပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီကို ဂျပန်လူမျိုးအများစုတောင် မသိကြတဲ့အကြောင်းအရင်းက ငွေပိုထွက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထွေထွေစားသုံးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်တာကြောင့် ကြော်ငြာအတွက် ငွေအသုံးပြုစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အလုပ်ရှာဖွေရေးအချိန်ရောက်မှသာလျှင် ကြော်ငြာကိုရိုက်ပါတယ်။
အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကို ရရှိဖို့အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူအများအပြားနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။
အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာတော့ ထိုအောင်မြင်မှုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ယန္တရား၊ ဒီအပြင် ဗျူဟာကို စာအုပ်ထုတ်ပြီး ရောင်းချတာမျိုးလုပ်ပေမဲ့၊ ဒီကုမ္ပဏီကတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်း လုံးဝမရှိပါဘူး။
သူဌေးဟာ မီဒီယာတွေနဲ့တွေဆုံခြင်းမျိုးလည်း မလုပ်ပါဘူး။
ငွေအပိုထွက်စေမယ့်အရာတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရလဒ်က၊ အပြင်ကနေကြည့်ရင်တော့ ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့၊ အဲ့ဒီအစား အလဟသဖြစ်စေမယ့် အသုံးစာရိတ်တွေ မထွက်တော့ပါဘူး။
ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရောင်းအားကိုမြင့်တင်ပါသလဲ? ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့
KEYENCE ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ဗျူဟာက အလွန်ရိုးရှင်းနေပါတယ်။
“ ကမ္ဘာမှာမရှိတဲ့အရာကိုသာ ဖန်တီးပြီး၊
၎င်းကိုလိုအပ်တဲ့ ဖောက်သည်ထံကို ထိရောက်တဲ့နည်းနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးတယ်”
KEYENCE ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ကမ္ဘာ့အစောဆုံး၊ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်၊ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားကြပါတယ်။ ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ဦးဆုံးကတည်းက ဒါကိုရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုစကားလုံးတွေတပ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဆို၊ အရောင်းသွက်ကြတယ်နော်။
ဒီအပြင် သူတို့တွေရဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာမှာ အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးက “ ဆင့်ပွားခြင်း” တဲ့
ဖောက်သည်ထံကို ပစ္စည်းတစ်ခုပို့မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါ၊ လုပ်ငန်းတူ၊ ကုန်ထုတ်စက်ရုံတူ၊ လိုအပ်ချက်တူတဲ့နေရာကို သေချာပေါက် ရောင်းချပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဝန်ထမ်းတွေဆီ သေသေချာချာ feedback ပြန်ပေးခိုင်းပြီး၊ ဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲ အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်တွေကို ပွားများသွားပါတယ်။
တစ်ခါမှမသုံးဖူးတဲ့ပစ္စည်းက ဖောက်သည်လက်ထဲရောက်ဖို့ဆိုတာ ခက်ပါတယ်။ သို့သော် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဥပမာရှိရင် ၎င်းကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ စေ့စပ်စွာ ပြန်အသုံးချခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဗျူဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ကို အလွယ်တကူ စုစည်းရရင်၊
– အခြားကုမ္ပဏီတွေမှာမရှိတဲ့အရာကိုသာ ထုတ်လုပ်ခြင်း
– အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို စေ့စပ်စွာ ပြန်လည်ပွားများခြင်း
စတဲ့အဓိကအချက် ၂ ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းက စာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ အခုကနေစပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ချင်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တို့
KEYENCE ကုမ္ပဏီရဲ့ အောင်မြင်မှုနည်းဥပဒေဟာ အလွန်ရိုးရှင်းသလို၊ ငွေကြေးအလဟသဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလည်း မရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့် KEYENCE ဟာ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့ မြင်မိပါတယ်။
နတ်ဆိုးတွေဟာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဘာကြောင့် ရင်မဆိုင်လို့မရတာလဲ ?